PressReader - Ilanga: 2017-11-02 - NAMBUZANE EZINHLOBONHLOBO
Ilanga - 2017-11-02 - Bono - SICELO KUNENE
nopelepele ogayiwe. Iphunga eliphuma lapho liyaxhopha futhi lenza umzimba wesilwane ulume.
Abanye abafundi babekhathezeke kakhulu ngezilinganiso zikaphethiloli ekwenzeni lo msebenzi, ngingeze ngaqinisekisa ukuthi ungakanani osetshenziselwa indawo engakananai kodwa uma ekhona umfundi oseke wakuzama lokhu, angasicobelela.
Ingxube kapelepele: Gaya upelepele ongagcwala inkomishi yetiye ubesampuphu, uwubilise emanzini angamalitha amane. Uma sekubila, thela amanye amalitha amane amanzi bese uchathaza amaconsi ambalwa ensipho yokugeza izitsha.
Ungafutha lapho kuhlasele khona izintuthwane, iziphungumangathi, iminenke nalezi zinambuzane ezimnyama eziba yinamathela emaqabungeni nasezimbalini esizibiza ngokuthi amaphithi ( Aphids).
Ingxube kagaligi: Gaya ugaligi ongaba wuhhafu wenkomishi yetiye, uxube namanzi angaba wuhhafu welitha. Yilalise ubusuku obubodwa le ngxube bese ngakusasa ungezela amanzi angaba wuhhafu welitha namaconsi ambalwa ensipho yokugeza izitsha.
Uma usuyisebenzisa le ngxube uzothela ilitha elilodwa layo emanzini angama-20l bese uyafutha ensimini.
Ungawusebenzisi ngokweqile ugaligi ngoba kungaphazamiseka ngisho nezilokazane eziwusizo futhi zigcine sezinezivikelamzimba kuyo le ngxube bese wena uthi uyabulala kanti usimamisa impilo yezilokazane.
Ungathintana nathi kwethi: 082 789 4281 noma ngokuxhumana nathi kwisizabulwembu ( website) esithi: www.sicelokunene.co.za, ekhasini elithi: Contact us.